Crete, eze nwanyị kacha mma osimiri Mediterenian | Akụkọ Njem
Crete, eze nwanyị kacha mma osimiri Mediterenian
Mariela Carril | | Greece, Osimiri
Oge okpomọkụ na-eru nso ma na-eru nso na Gris na-egosi na njedebe nke ọtụtụ ndị nwerelarị ezumike ha. Otu n'ime saịtị kachasị mma Krit, nke kachasị ukwuu na nke ndị bi na agwaetiti Greek.
Omenala ochie, agwaetiti, akụkọ ogologo na ọgaranya, ụsọ osimiri mara mma, nri dị ụtọ, egwu dị mma na saịtị ndị bara ezigbo uru na-achọpụta agwaetiti a bụ ebe anyị na-aga taa na-atụ anya na ọ ga-abụ ebe anyị ga-aga echi ... Kedu ka anyị si na-aga Krit, kedu ihe anyị ga-eme ebe ahụ na ihe ndị kasị mma osimiri:
1 Krit, nke dị na Mediterenian
2 Otu esi agagharị na Krit
3 Osimiri Crete
Krit, nke dị na Mediterenian
Dịka m kwuru Krit bụ otu n'ime agwaetiti ndị kachasị ukwuu na ọtụtụ mmadụ bi na agwaetiti Greek. Isi obodo ya bụ obodo Heraklion, obodo nke a guru dika nke kachasi na obodo. Otu n'ime isi ihe ochie kachasị ochie mere eme malite na Mycenaean mmepeanya na mkpọmkpọ ebe nke Obí Knossos na mkpọmkpọ ebe ndị ọzọ na-anọgide site n'oge ahụ, mana isi obodo ugbu a bụkwa obodo oge ochie ebe ọ bụ na ntọala ya malitere na narị afọ nke XNUMX.
Heraklion ga-abụ ọnụ ụzọ gị gaa Krit. Ebe a e nwere ọdụ ụgbọ mmiri azụmahịa na ọdụ ụgbọ mmiri ndị na-akpọbata gị ma ọ bụ kpọga gị na Santorini, Mykonos, Rhodes, Paros, Ios na ọdụ ụgbọ mmiri Piraeus, na Atens. Ọ bụrụ n’ịji ụgbọelu si Amerịka rute Gris, ị ga-abanyerịrị na Atens, yabụ ị ga-ejikọ ọdụ ụgbọ elu ya na ọdụ ụgbọ mmiri wee si n’ụgbọelu banye n’ụgbọ mmiri. Ihe kachasị mma bụ ịnọ ihe dị ka ụbọchị atọ na isi obodo Gris wee pụọ.
N'ọnọdụ ọ bụla, ọ bụrụ na ị si na Europe na-abata na Crete ị nwere ike iru ozugbo O nwere ọdụ ụgbọ elu mba ofesi. Ọ dị kilomita ole na ole, ihe dị ka ise, site na obodo ahụ, ma mgbe Atens gachara ya. N'ezie, ọtụtụ ụgbọ elu na-aga Atens. Flightsgbọ elu dị ọnụ ala bụ ndị nke ụgbọ elu dị ọnụ ala dịka Ryanair ma ọ bụ EasyJet, mana ọ bụrụ na ị na-eme njem n'oge ọkọchị, ọ ga-adị mma ma ọ bụrụ na ị ga-azụta ogologo oge tupu enwere ike n'ihi na agwaetiti ahụ bụ ihe ama ama.
E nwere ọdụ ụgbọelu abụọ ọzọ, na-adịchaghị mkpa mana ọ ga-ekwe omume na ụgbọ elu gị na-eji otu n'ime ha. E nwere ọdụ ụgbọ elu ndị agha nke Daskalogiannis, na Chania, na nke Ee nwanne nne, nke na-etinye naanị ụgbọ elu ụlọ. Flightgbọ elu n'etiti Heraklion ma ọ bụ Chania na Thessaloniki na-ewe nkeji iri itoolu na Rhodes n'otu elekere. Y’oburu na ibu karie i nwere ike iji ugbo ma ọ na-ewe ogologo oge.
Enwere ọrụ kwa ụbọchị site na Piraeus n'oge afọ na agbakwunye abụọ ọzọ n'oge ọkọchị. Site na Santorini, Mykonos na agwaetiti Cyclades ndị ọzọ ị nwere ike were catamarans ngwa ngwa. Enwere ụzọ ndị ọzọ si agwaetiti ndị dị nso, mana echere m na ndị a bụ ndị a tụrụ aro maka ndị njem nleta. Enwere ọtụtụ ụlọ ọrụ: Anek, Jets Sea, Hellenic Seaways, Lines Lines, dịka ọmụmaatụ.
Ọ bụrụ n'ị na-eme njem n'ụgbọ ala, ị kwesịrị ịdekọ na otu ihe ahụ ma ọ bụrụ na ị na-eme njem n'abalị ma ọ bụ na ọrụ ngwa ngwa. Nwere ike ịzụta tiketi na weebụsaịtị nke ụlọ ọrụ (Ha na-adịkarị ọnụ ala karịa na engines ọchụchọ), ma enwere ọnụahịa dị iche iche dị ka otu na ebe njem si aga. Ọ bụrụ na ị bụ nwa akwụkwọ, jụọ maka ego.
Otu esi agagharị na Krit
Nke mbu ekwesiri ikwu na na mgbakwunye Heraklion enwere obodo ndị ọzọ dị mkpa: Chania, Lassithi, Rethymno, Sitia, Agios Nikolaos na Ierapetra. Gagharị n’agwaetiti ahụ nwere ọrụ njem mejupụtara ụgbọ ala. Ọ dị ọnụ ala ma dịkwa mma karịa, ọ bụ ezie na ịnwere ike ịbanye na bọs na-apụ n'okporo ụzọ ma banye n'ime obodo n'ihi na onye njem mpaghara ahụ rịọrọ ya. Na Heraklion e nwere ebe ọdụ ụgbọ ala abụọ dị na etiti ma otu n'ime ha na-etinye uche na ọrụ KTEL (otu azụmaahịa ụgbọ ala).
Nhọrọ ozo bu gbazite ụgbọ ala Mana buru n'uche na anaghị anabatakarị kaadị akwụmụgwọ na ọdụ ụgbọ, ndị mmadụ anaghị asọpụrụ ihe ịrịba ama okporo ụzọ nke ukwuu, ndị ọkwọ ụgbọ ala na-eme ihe ike n'ụzọ ha si agagharị ma na-adọba ụgbọala n'obodo ukwu dị ụkọ. Ọzọkwa enwere tagzi ma ọ bụrụ na mmefu ego gị pere mpe, anaghị m akwado ya maka na ọ bụ ọrụ dị oke ọnụ. Enwere tagzi ebe niile, ee, na ọnụego abụọ: ehihie na abalị.
Crete nwere ọtụtụ osimiri. E nwere ụsọ osimiri dị na Chania, Heraklion, na Rethymnon, na Lassithi, Hersonissos na ọbụna ụfọdụ naturist osimiri. Mmiri n’oge ọkọchị na-ekpo ọkụ, n’agbata 26 na 27ºC na July na 20ºC na Mee. Ha anaghị ajụkarị oyi n’ihi ya enwere ndị na-ekwu ya enwere ike igwu mmiri n'afọ niile. Osimiri kacha jụụ nke nwere mmiri na-ekpo ọkụ bụ ndị dị n'ụsọ ebe ugwu. Ha nwekwara ndị na-echebe ndụ. N'ezie, ifufe dị ike ma mepụta ebili mmiri ma ọ bụrụ na ịnweghị ahụmịhe igwu mmiri n'oké osimiri ... kpachara anya!
Osimiri ndị dị n'ụsọ oké osimiri ndịda na-enwekarị ndị ọbịa ole na ole, ọ bụ ya mere ụfọdụ ndị na-ama ụlọikwuu ji ahọrọ ha ka ha maa ụlọikwuu ha, ọ bụ ezie na anaghị anabata ya. Ma n'otu ụsọ mmiri ma na nke ọzọ, ma ọ bụrụ na a na-ahazi osimiri ahụ, ịnwere ike ịgbazite oche oche na nche anwụ maka n'etiti euro 5, 6 ma ọ bụ 7. Ọ bụ nhọrọ, ọbụlagodi na ọ dị gị ka nche anwụ na-ejide agwaetiti ahụ dum, enwere ngalaba na-akwụghị ụgwọ ọ bụla.
Osimiri ndị dị na Krit adịghị mma n'ihi na ọ dịghị anụmanụ dị ize ndụ. Enwekwara oke osimiri ụfọdụ, ọ bụ ezie enyeghị ikike ịgba ọtọ, ọ nabatara ya. Ọ gaghị ekwe omume ịme a ndepụta nke osimiri kacha mma na Krit n'ihi na ha dị ọtụtụ, mana nhọrọ m na nke ọtụtụ ndị bụ ihe ndị a:
Bọọlụ: Ọ bụ ọmarịcha osimiri mepere emepe, nwere aja ọcha na mmiri turquoise. A na-eji ụgbọ ala ma ọ bụ ụgbọ mmiri erute, mana enweghị ụgbọ ala ma ọ bụ ndị nchekwa ndụ. Abughi ndo nkịtị kama a na-akwụ ụgwọ ụlọ na oche ndozi. Bụ a osimiri nudism enyi na enyi mmiri dị ala. Ọ dị na Chania.
Elafonissi: dịkwa na Chania, ọ bụ ebe dị mfe ịnweta n’ihi na ị nwere ike iru ebe ahụ site n'ụgbọ mmiri, bọs, ụgbọ ala ma ọ bụ ụkwụ. White aja, jụụ mmiri, anabata nudism, ndị mmadụ sọọfụ, onye ọ bụla na-ekpori ndụ na Blue ọkọlọtọ.
Nne: Ọ bụ osimiri mara mma na Lassithi, nke nnukwu ọhịa nkwụ gbara na Europe. Puku osisi ise!
Preveli: ọ bụ osimiri dị na Rethymno nke nwere osimiri nke na-asọba n'oké osimiri, mara ezigbo mma. Ọbụna ọ na-etolite ụdị ọdọ dị n'akụkụ oké osimiri nke mara mma maka igwu mmiri.
Gbuo ya: osimiri kachasị ama na Heraklion. Bụ a osimiri hippie nwere oghere na uzo uhie. Ọ bụ osimiri a haziri ahazi na oge ọkọchị ọ bụla na-ewu ewu Ememme egwu.
Ihe kpatara: Ọ bụ ụsọ osimiri dị n'ọnụ ọnụ Osimiri Agiofarago, nwere ọgba na ọgba dị nso. E nwere ụlọ ụka San Antonio nke dị nso na mmiri iyi nke na-asọba n'oké osimiri, dị mma maka mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ma ọ bụrụ na okpomọkụ na-ere osimiri ahụ. Na-abịarute site na ịga ije site n'ugwu ma ọ bụ site na ndagwurugwu ma ọ bụ ụgbọ mmiri.
Dunes nke San Pavlos: a na-atụle otu n'ime osimiri kachasị mma na KritO nwere mmiri ọkụ ma ndị mmadụ na-abịa ịchọ nzuzo. Foot ga-eji ụkwụ ma ọ bụ ụgbọ mmiri rute ebe ahụ, enweghị ndo dị n'okirikiri mana ị na-agbazite umbrellas.
Tụlee nke ahụ Crete nwere ihe karịrị kilomita 1000 nke ụsọ oké osimiri ya mere enweghi iri ma ọtụtụ narị osimiri, mara, ewu ewu, nzuzo, dịpụrụ adịpụ. Site na ihe niile masịrị gị. Ọ bụrụ na ịnweghị oge iji gaa n'oge okpomọkụ a, tụlee agwaetiti ahụ maka ọzọ ma ọ bụ ma eleghị anya maka oge ọzọ. Na obere oge site na Nọvemba rue Machị, ikuku dị jụụ, ma ọ bụ etiti oge nke bụ site n ’Eprel rue Juun na site na Septemba rue Ọktọba ma nye anyị ihu igwe kachasị mma maka ịgagharị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » njem » Osimiri » Crete, eze nwanyị kacha mma osimiri Mediterenian
Marathons kachasị achọsi ike na ụwa